ဒီလ ၈ ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲမှ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ - Shwe Yaung Lan
ပရိသတ်ကြီးရေ ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေထီဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ခု အောက်တိုဘာလမှာ ဆိုရင် ၈ ကြိမ်မြောက် ဖြစ်သွားပါပြီ… ဆုကြေးတွေကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးထားရာမှာ အမြင့်ဆုံးဆုက ကျပ် သိန်း ၁၅၀၀၀ ပဲဖြစ်ပါတယ်…. ဆုကြေးတွေမြင့်လာတာနဲ့ အမျှ အမြင့်ဆုံးထီဆုသာ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ရင် အဲဒီလူရဲ့ ဘဝဟာ တမဟုတ်ချင်း နတ်ရေကန်ထဲ ချသလို ပြောင်းလဲ သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
အက်မင်ကတော့ မရှိဆင်းရဲသားတွေကို အရမ်းပေါက်စေချင်တာပါ…ကိုယ်တိုင်လည်း ပေါက်ချင်တာပေါ့လေ ဟီးးး…
ခုဒီနေ့ထွက်တဲ့ ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ပိုင်ရှင်ထွက်ပေါ်လာပြီမို့လို့ ပရိသတ်ကြီးပါ မုဒိတပွားဝမ်းသာရအောင် မျှဝေပေးလိုက်တယ်နော်…
ဒီလရဲ့ ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုကို ထီလက်မှတ် ဓ ၃၄၁၆၁၁ နဲ့ ဆွတ်ခူးသွားသူကတော့ မိတ္ထီလာမြို့ က.ည.န ရုံးဟောင်းနားမှာ နေတဲ့ ကိုစိုးနိုင်ပါတဲ့….
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သူပေါက်တဲ့ ထီလက်မှတ်လေးနဲ့ အတူ သမီးဖြစ်သူနဲ့ ၂ ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတင်ထားတာကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဝမ်းသာရအောင် မျှဝေပေးလိုက်တယ်နော်…..ထီပေါက်တဲ့ အစ်ကိုကြီးရေ ဝမ်းသာပါတယ်… အစ်ကိုကြီးလည်း အလှူဒါန တွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါစေ…..
ကိုစိုးနိုင်အတွက် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဝမ်းသာစရာစကားလေးလည်း ပြောခဲ့ပါအုံးနော်…. နောက်ကျန်တဲ့ ထီဆုတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ စာမျက်နှာလေးက ဖော်ပြပေးသွားမှာမို့ မကြာမကြာဝင်ကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်…
Source : သန်းဝင်းလှိုင်(ထီလာဆား)
ပရိသတ္ႀကီးေရ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ခု ေအာက္တိုဘာလမွာ ဆိုရင္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သြားပါၿပီ… ဆုေၾကးေတြကုိလည္း တိုးျမွင့္ေပးထားရာမွာ အျမင့္ဆံုးဆုက က်ပ္ သိန္း ၁၅၀၀၀ ပဲျဖစ္ပါတယ္…. ဆုေၾကးေတြျမင့္လာတာနဲ႔ အမွ် အျမင့္ဆံုးထီဆုသာ ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ရင္ အဲဒီလူရဲ႕ ဘဝဟာ တမဟုတ္ခ်င္း နတ္ေရကန္ထဲ ခ်သလို ေျပာင္းလဲ သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္…
အက္မင္ကေတာ့ မရွိဆင္းရဲသားေတြကို အရမ္းေပါက္ေစခ်င္တာပါ…ကိုယ္တိုင္လည္း ေပါက္ခ်င္တာေပါ့ေလ ဟီးးး…
ခုဒီေန႔ထြက္တဲ့ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ပိုင္ရွင္ထြက္ေပၚလာၿပီမို႔လို႔ ပရိသတ္ႀကီးပါ မုဒိတပြားဝမ္းသာရေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္တယ္ေနာ္…
ဒီလရဲ႕ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆုကို ထီလက္မွတ္ ဓ ၃၄၁၆၁၁ နဲ႕ ဆြတ္ခူးသြားသူကေတာ့ မိတၳီလာၿမိဳ႕ က.ည.န ရံုးေဟာင္းနားမွာ ေနတဲ့ ကိုစိုးႏိုင္ပါတဲ့….
အြန္လိုင္းေပၚမွာ သူေပါက္တဲ့ ထီလက္မွတ္ေလးနဲ႔ အတူ သမီးျဖစ္သူနဲ႔ ၂ ေယာက္တြဲရိုက္ထားတဲ့ ပံုေလးတင္ထားတာကို ပရိသတ္ႀကီးတို႔ ဝမ္းသာရေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္တယ္ေနာ္…..ထီေပါက္တဲ့ အစ္ကိုႀကီးေရ ဝမ္းသာပါတယ္… အစ္ကိုႀကီးလည္း အလွဴဒါန ေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါေစ…..
ကိုစိုးႏိုင္အတြက္ ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း ဝမ္းသာစရာစကားေလးလည္း ေျပာခဲ့ပါအံုးေနာ္…. ေနာက္က်န္တဲ့ ထီဆုေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ စာမ်က္ႏွာေလးက ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔ မၾကာမၾကာဝင္ၾကည့္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္…
Source : သန္းဝင္းလိႈင္(ထီလာဆား)
Previous post ကားေမာင္းေနရင္း live လႊင့္ရာမွ ကားေမွာက္တ့ဲပံုပါ live ထဲပါသြားသူ
Next post အခါပေးဆရာပြောတဲ့အတိုင်းထီစပ်တူထိုးရာက သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကားဝပ်ရှော့ဆရာကိုစိုးနိုင်